Iimveliso zeeMveliso zoMbundo
Itshathi yokuHamba yoHlolo lomngundo
Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo kwimveliso yokubumba
Njengoko sinxibelelana namashishini amaninzi nangakumbi emveliso yokungunda, ngaba uyazi ukuba ngawaphi amanyathelo oyilo lokungunda kweplastiki? Zeziphi izakhono ezifunekayo abaqulunqi bokubumba kwishishini lokungunda kufuneka bazazi kakuhle? Nangona le ingeyonto esixhalabele kakhulu ngayo, kufuneka iqondwe....
Yenzeka njani i-“burr” yesitofu sokungunda?
Iimveliso zokubumba izitofu zibhekisa kwiiplastiki ezifudunyezwayo, zenziwe ngeplastiki kwaye zinyibilike ngomatshini wokubumba inaliti, emva koko zitofelwe kumngxuma wokubumba ukubumba. Emva kokupholisa phantsi, inyibilika iyaqina kwaye idityaniswe, kwaye umatshini wokubumba wokutofa uyabunjwa. Fl...
Uhlalutyo lweengxaki kunye nezizathu ze-injection mold!
Ukuguqulwa, ukugoba kunye nokujijwa kweemveliso ezigogekileyo ikakhulu ngenxa yokuba isantya sokucutheka kwicala lokuhamba sikhulu kuneso kwicala elithe nkqo ngexesha lokubumba iplastiki, nto leyo ebangela ukuba iindawo zijike ngenxa yamazinga ahlukeneyo okucutheka kwicala ngalinye. . Yi...
Kutheni imingundo enemilo yemveliso entsonkothileyo ifuna amajelo okupholisa asemthethweni?
Siyazi ukuba ukuze ufumane iimveliso ezibunjiweyo zesitofu, ubuncinane amanqaku amabini kufuneka agcinwe engqondweni: ngexesha lokubumba, ukuhamba kwesantya sokunyibilika kwi-cavity kufana ngokunokwenzeka, kwaye ubushushu bodonga lomngxunya. ukungunda kuyafana kangangoko kunokwenzeka. Ukuba i...
Iingcebiso malunga nokugcinwa kunye nokugcinwa kwesitofu sokungunda
Ukuqhubela phambili kwinqaku lokugqibela, ndiya kuqhubeka ndithetha ngenye inxalenye yeengcebiso zokugcinwa kwe-injection mold kunye nokugcinwa. 1. Xa utyando luhamba kwaye lufuna ukuvalwa okwethutyana, umngundo kufuneka uvalwe ukunqanda umngxuma kunye nombindi ukuba ungavezi ukunqanda...
Iimbumba zeplastiki zeplastiki zineemfuno eziphezulu kakhulu. Ngokuqhelekileyo, izixhobo zePP zokusingqongileyo zisetyenziswa kakhulu, ezinokuvelisa indawo eqaqambileyo kwaye emva koko zenze ukuprintwa kwefilimu kunye nolunye unyango, oluba ngumgqomo wenkunkuma ophezulu. Kodwa ukwenza umgqomo olungileyo, okokuqala, umgangatho we ...
Yintoni isakhiwo se-mol yeplastiki
Ngenkqubela phambili yenzululwazi kunye nobuchwepheshe, uphuhliso lwezibungu zeplastiki lukhawuleza kakhulu kwiindawo ezininzi. Iimbumba zeplastiki zizixhobo ezihambelana noomatshini bokubumba iplastiki kwishishini lokulungisa iplastiki ukunika iimveliso zeplastiki ukucwangciswa okupheleleyo kunye nemilinganiselo echanekileyo. Ngenxa ye...
Ukusetyenziswa okuchanekileyo kwesitofu sokungunda
Indlela yokusebenzisa i-injection mold ngokuchanekileyo? U-Aojie uzakuphendula! I-1.Ukuvulwa kunye nokuvala isantya sokubumba kunye nokulungiswa kokukhusela i-voltage ephantsi Xa i-injection mold ivuliwe okanye ivaliwe, umthetho wokutshintsha isantya "ukhawuleza-ukukhawuleza" amanqanaba e-3 yesantya. Kwinkqubo yokuvala isikhunta, ngokulandelelana ...
Ulwahlulo lokungunda inaliti
Loluphi uhlobo lokungunda lokutofa olunokwahlulwa lube? Ukuhlelwa kokungunda okuqhelekileyo kunokohlulwa ngokwezi ndidi zilandelayo: 1.I-single parting surface injection mold.
Umgangatho wokungunda Kwiminyaka eyi-11 edlulileyo, i-Aojie Mold ibe yenye yeenkampani ezinkulu zokungunda e-China. Ngexesha le-10 ukuya kwi-15 leminyaka yokuqala yophuhliso lweshishini lokungunda laseTshayina, ezo nkampani ezigxile kumgangatho wokungunda kunye nolawulo lomgangatho ziphumelele uphuhliso olukhawulezayo. I-Aojie Mold i...
Ubuchwephesha obutsha boMngundo wePlastiki
Kukho umgaqo osisiseko ekukhetheni intsimbi yokubumba. I-30%, kwaye umlinganiselo wokungenisa kunye nokuthunyelwa kwe-mold kuphezulu njenge-50 ~ 70%. Yeemveliso zeplastiki Isetyenziswa kakhulu kwaye ibonelela ngemarike ebanzi kakhulu yokubumba iplastiki. Ukongeza, iqhutywa ngu...
Indlela yokukhetha i-Mold Steel?
ngu admin on 21-07-15
Kukho umgaqo osisiseko ekukhetheni intsimbi yokubumba. A. Intsimbi yokungunda kufuneka ihlangabezane nemeko yayo yokusebenza. 1. ukuxhathisa abrasive. Xa iplastiki iqukuqela kumgodi wokungunda, kuya kubakho ukungqubana okunzulu phakathi kweplastiki kunye nomphezulu womgodi, nangaphezulu...